भरियालाई लाग्यो चुनाव– ‘भोट हाल्न त जाने हो बाबु’ | Diyopost - ओझेलको खबर भरियालाई लाग्यो चुनाव– ‘भोट हाल्न त जाने हो बाबु’ | Diyopost - ओझेलको खबर
भरियालाई लाग्यो चुनाव– ‘भोट हाल्न त जाने हो बाबु’
दियो पोस्ट सम्पादक मंगलबार, बैशाख १३, २०७९ | ८:४९:३२
काठमाडौं, । काठमाडौंको न्यूरोडमा भारीको खोजीमा नाम्लो बोकेर हिँड्दै गर्नुभएका ७३ वर्षीय ज्ञानबहादुर भण्डारीलाई पनि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रो स्थानीय तहको निर्वाचनले छोएको छ ।
धादिङको गल्छी गाउँपालिकाका स्थायी बासिन्दा भण्डारी वैशाख ३० गते मतदानको दिन गाउँकै मतदान केन्द्रमा पुगेर भोट हाल्न आतुर हुनुहुन्छ । त्यसका लागि उहाँले आजैदेखि चाँजोपाँजो मिलाउन थाल्नुभएको छ । “भोट हाल्न त जाने हो बाबु”, उहाँले भन्नुभयो, “आफ्नो मत दिने अधिकार त छोड्नुभएन नी ।” उहाँलाई छोराले पनि भोट हाल्न आउनु भनेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
यो उमेरमा पनि भण्डारीको थाप्लामा नाम्लो टुटेको छैन । उहाँको दैनिकी २३ वर्षदेखि यसरी नै चलिरहेको छ । उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सामान ओसारपसार गर्ने दैनिक पेशा हो उहाँको । आजसम्म कति पटक भोट हाल्नुभयो ? “गनेको त छैन, तर धेरैपटक भयो”, उहाँको जवाफ छ । जीवनको अधिकांश समय भोट हालेको अनुभव सुनाउने भण्डारीको जोश कायमै छ ।
भारी बोकेर दैनिक पाँच/सात सय कमाउने भण्डारीले युवावस्थामा गाउँमा लागेको चुनाव अहिले पनि सम्झनुहुन्छ । त्यसैको छिटाले उहाँलाई चुनावी माहोलमा सहभागी हुन कुतकुत्याउने गरेको छ । गाउँ जाने हुटहुटी छ । तर भारी नबोकी भोक नमर्ने भएपछि उहाँ रोकिनुभएको छ ।
मतदानको अघिल्लो दिनतिर भोट हाल्न जाने तयारीमा रहनुभएका भण्डारी नेताहरुले केही गर्छन् भन्ने आशामा भने हुनुहुन्न । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिप्रति कत्तिको आशा छ ? उहाँ सुनाउनुहुन्छ, “आशा त के हुनु र, गाउँमा विकास खुलाइदिए, रोजगारी दिए हुन्थ्यो ।”
काठमडौंमा भेटिएका भण्डारी जस्तै असङ्गठित मजदुर तथा बटुवा पनि स्थानीय तहले गाउँगाउँमा सरकार पुगेको अनुभूत गर्नुहुन्छ । तर त्यसभित्र भएका व्यक्तिहरुको व्यवहार, विभिन्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै आर्थिक तथा सामाजिक अपराधमा संलग्न हुने गरेका घटना बाहिरिँदा भने उहाँहरुप्रति जनविश्वास घटेको छ ।
विकासमा आएका बजेट आफ्नै मान्छे र आफैँले उपयोग गर्ने घटना पनि बाहिर आएकाले त्यस्ता गतिविधिका कारण नागरिकमा वितृष्णा कायमै छ । यद्यपि, धेरै स्थानीय तहले उत्कृष्ट काम गरेका उहाँहरु अनुभव सुनाउनुहुन्छ ।
काठमाडौं महानगरपालिका–१९ की लक्ष्मी सिन्दुराकार पनि चुनावमा भोट हाल्ने तयारीमा हुनुहुन्छ । मतदानका दिन वैशाख ३० को प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ । उहाँलाई चुनाव खासै लाग्दैन तर भोट छुटाउन हुँदैन भन्नेमा निश्चिन्त हुनुहुन्छ । मत खेर फाल्न हुँदैन भनेर अरुलाई समेत सन्देश दिने सिन्दुराकार पनि चुनाव जितेर जाने प्रतिनिधिहरुप्रति भने विश्वास नलाग्ने बताउनुहुन्छ ।
काठमाडौंमा बस्ने झापाको दमकका दीपेन्द्र कार्कीको भोट हाल्ने व्यग्र चाहना छ । यहाँको जागिरका कारण झापा जान नसक्ने भएकाले भोट हाल्न नपाउने गुनासो छ उहाँको ।
“राजनीतिक अवस्था अहिले झन् बिग्रिएको छ”, कसैले केही गर्लान् भन्ने आश घट्दो छ, जनतालाई केही हुने देखिएन”, उहाँको प्रश्न थियो “जनतालाई राहत दिने काम के गरे र खोइ ? कर बढाइरहेको छ, महँगी बढिरहेको छ, बजार भाउ छोइसक्नु छैन, गर्छन् भनेर के आश गर्नु ।”
काठमाडौंको सुन्धारामा भेटिएका बाग्लुङका विश्वास मगरले भने अहिलेसम्म भोट हाल्नुभएको छैन । अधिकांश समय विदेशमा भएकाले उहाँ त्यो अबसरबाट बञ्चित हुनुभयो । उहाँले पारिवारिक समस्याका कारण बाध्यतामा विदेशिनु परेको सुनाउनुभयो ।
वैशाख १३ गते उम्मेदवारविरुद्ध उजुरी दिने, १४ र १५ गते मनोनयनपत्र जाँच गर्ने, १५ गते नै मनोनयन भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन गर्ने, १६ गते उम्मेदवारको नाम फिर्ता लिने र अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तथा १७ गते उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिह्न प्रदान गर्ने कार्यतालिका रहेको निर्वाचन छ ।
मंगलबार, बैशाख १३, २०७९ | ८:४९:३२